Shiinaha Hydrochlorothiazide soosaarayaasha iyo alaableyda | CPF
Hydrochlorothiazide Diuretics USP / EP / CEP 16750 √ CEP 2006-011
Hydrochlorothiazide (HCTZ), oo ah daawo ku dura afka firfircoon oo firfircoon ee fasalka thiazide, ayaa horjoogsata badalida TGF-β/ Wadada calaamadeynta Smad. Hydrochlorothiazide waxay leedahay saameyn toos ah oo isdaba joog ah iyadoo la adeegsanayo furitaanka kanaalka kaalshiyam-ka-firfircoon (KCA). Hydrochlorothiazide wuxuu hagaajiyaa shaqada wadnaha, wuxuu yareeyaa fibrosis wuxuuna leeyahay saameyn antihypertensive.
Hydrochlorothiazide waa daroogo dura oo ka tirsan fasalka thiazide.
Hydrochlorothiazide waxay ka tirsan tahay fasalka loo yaqaan 'thiazide of duras'. Waxay yareysaa mugga dhiigga iyadoo lagu shaqeynayo kelyaha si loo yareeyo soo-celinta soodhiyamka (Na) ee tubada isku-dhafan ee isku-dhafan. Goobta ugu weyn ee waxqabadka nephron-ka waxay ka muuqataa koronto-wadaha Na + -Cl wada-qaadaha iyadoo loo tartamayo goobta chloride-ka ee xamuulka. Adoo curyaaminaya Na gaadiidka qashinka isku dhafan, hydrochlorothiazide waxay keentaa natriuresis iyo biyo lumis is raacsan. Thiazides waxay kordhisaa dib u soo celinta kaalshiyamka qaybtaan qaab aan ku xirneyn gaadiidka sodium. Intaa waxaa sii dheer, farsamooyin kale, Hydrochlorothiazide ayaa la rumeysan yahay inay hoos u dhigeyso caabbinta xididdada dhiigga ah.
Hydrochlorothiazide (HCTZ; bygavage hadal ahaan; 12.5 mg / kg / d; 8 toddobaad) waxay hagaajisay shaqada wadnaha, hoos udhaca wadnaha wadnaha iyo faleebada kolajka, hoos udhaca muujinta AT1, TGF-β iyo Smad2 oo ku jira unugyada wadnaha ee ragga waaweyn ee Sprague Dawley. Intaa waxaa dheer, hydrochlorothiazide wuxuu yareynayaa heerarka plasma angiotensin II iyo aldosterone. Intaa waxaa sii dheer, hydrochlorothiazide wuxuu joojiyaa angiotensin II-induced TGF-β1 iyo muujinta borotiinka 'Smad2' ee jiirka dhalaanka dhalmada fibroblasts.
Hore: Acid folic